Donald Trump Oo Sheegay In Aanu Dhageysan Doonin Cod Laga Duubay Dilka Jamal Kashoggi – somalilandtoday.com
Donald Trump Oo Sheegay In Aanu Dhageysan Doonin Cod Laga Duubay Dilka Jamal Kashoggi
(SLT-Washington)-Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in lala wadaagay macluumaad ku saabsan cod laga duubay dilka Jamal Khashoqji oo ahaa saxafi Sacuudiga u dhashay, balse wuxuu sheegay in isagu uusan si shaqsi ah u dhagaysan doonin.
“Waa duubid laga sameeyay sakaraad, waana arrin fool xun,” ayuu Axaddii ku yidhi warbaahinta Fox News.
Hay’dda Sirdoonka Maraykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo CIA ayaa la sheegay in baaritaankii ay dilkan ku haysay ay ku soo gabogabaysay in awaamiirta khaarajinta uu bixiyay Amiirka dhaxalka Sacuudiga leh ee awoodda badan, balse Aqalka Cad ayaan wali arrintaas ayidin.
“Wax kaste oo cajalka ku duubaan waan ogahay anoon dhagaysanin,” ayuu ku yiri warbaahinta Fox.
“Iyadoo taasi jirtana iskaashi ayaan leenahay, waxaana doonayaa in aan garab istaago dal aan iskaashi leenahay siyaabo badanna u wanaagsanaa,” ayuu intaas ku sii daray.
Inkastoo Hay’adda Sirdoonka Maraykanka ee CIA aysan si toos ah u sheegin in ay hayso caddaymo muujinaya in Amiir Maxamed Bin Salmaan uu si toos ah ugu lug lahaa dilka, haddana waxay rumaysan tahay in dilkaasi uusan dhaceen haddii aan ogolaansho laga haysanin.
Balse wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Maraykanka ayaa Sabtidii sheegtay in dawladdu aysan wali gabogabaynin baadhitaataannadii dilka lagu hayo, iyadoo ay wali jiraan “warar la isla dhexmarayo iyo kuwo aan laga jawaabin.”
“Labada maalmood ee foodda inagu soo haya waxaan heli doonnaa warbixinta oo dhamaystiran, waxayna u badan tahay Isniinta ama Talaadada” ayuu u ku yiri saxafiyiinta.
“Haddii uu doonayo in uu noqdo wajiga Sacuudi Carabiya hoggaaminaya, waxay ila tahay wakhti adag ayaa sugaya boqortooyada marka ay timaaddo masraxa caalamka,” ayuu yiri isaga oo la hadlaya warbaahinta NBC.